ရွှေမြန်မာမှ ကြိုဆိုပါတယ်: November 2012
သင်ရဲ့ ငွေကြေးများကို မြဲမြဲမြံမြံ ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မည့် နည်းလမ်း
သင်၏ ငွေကြေးရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို စည်းစနစ်တကျဖြစ်အောင် အရင်ဆုံး ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ပါ။
မည်သည့်အသုံးစရိတ်အတွက် ငွေပမာမည်မျှ သုံးစွဲနိုင်သည် ဆိုသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားခြင်း မရှိပါက ၀င်ငွေ၊ လစာများ နောက်တစ်ကြိမ် ၀င်မလာမီ ကျွန်မတို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်များအား ပိုမိုသုံးစွဲထားမိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ၀င်ငွေအသစ်များ ၀င်ရောက်မလာမီ ကာလတစ်လျှောက် ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်ချည်းသက်သက် မလောက်မငှ ဘ၀နဲ့ အသက်ဆက်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကို အလွန်အရေးပါသော အရာများတွင် သုံးစွဲရန်အတွက်သာ တာစူထားသင့်ပါတယ်။ ငွေကို မည်သည့်အခါမျှ အလဟဿ ဖြုန်းတီးမပစ်သင့်ပေ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဝင်ငွေများအား စနစ်တကျ စိစစ်သုံးစွဲမှသာ ငွေကြေး ကြပ်တည်းမှုအခြေအနေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်မ မြင်မိပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ၀င်တဲ့ငွေနဲ့ သုံးတဲ့စရိတ်က မလောက်မငဖြစ်တတ်တာကို သင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ကျွန်မ အမြင်အရပြောရရင် ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေကို စာရင်းပြုစုမှု မပြုလုပ်ပဲ ၀င်သမျှကို သုံးစွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by manawphyulay at 1:37 AM No comments:
ရှင်… ကျွန်မလား။ စာရေးဆရာမပါ။ တစ်ချို့ကတော့ ဆရာမလေးလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ နာမည်လား။ မနောဖြူလေးပါတဲ့။ မကြားဖူးပါဘူး ဟုတ်လား။ သိပ်လည်း စဉ်းစားမနေပါနဲ့။ အဲ အထင်လည်း ကြီးမနေနဲ့ဦးနော်။ ကျွန်မက မတောက်တခေါက် ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းကို စိတ်ထဲရှိသလို ချရေးတာပါ။ အင်းလေ ရှင်တို့ မဖတ်ဖူးတာ မဆန်းပါဘူး။ မဖတ်ဖူးလို့လည်း ဘာမှမပြောပါဘူး။ ကျွန်မရေးတဲ့နေရာလေးက ကျွန်မ ပျော်မွေ့နေတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာတည်းမှာဆိုတော့ ဘယ်သိကြမလဲနော့။
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မလည်း စာရေးဆရာမလို့ အရင်ထဲက သတ်မှတ်မထားခဲ့ပါဘူး။ စာရေးဆရာမ ဖြစ်လောက်အောင်လည်း စာပေအရေးအသားကို ထဲထဲဝင်ဝင် ရေးတတ်တဲ့သူမှမဟုတ်တာ။ ငယ်ငယ်တုန်း ကတော့ ပြောရရင် ၇ တန်းတက်ထဲက စာဖတ်ဝါသနာတော့ အတော်ပါလားသားရှင်။
သြော်… ဟုတ်ကဲ့။ ခုလို ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ရေးတတ်ပုံလေး ပြောပြရမှာလား။ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီလောက်တော့ ပြောပြရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီလိုရှင့် ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းထဲက စာအုပ်တွေ ဖတ်တယ်။ ၇ တန်းတုန်းကတော့ ကျောင်းတောင် သယ်သွားပြီး စာသင်ချိန်မှာ ခိုးဖတ်တာရှင့်။ ဒီလို ခဏခဏ ခိုးဖတ်တာ များလာတော့ စာသင်တဲ့ ဆရာမက တစ်ရက်တော့ မိသွားတာပေါ့။ ဒီတော့ ပြောရတာပေါ့။ ဆရာမ ဖတ်ဖို့ သမီး ယူလာတာလို့။ ဟဲ ဟဲ မနောပဲ ဘယ်ရမလဲ ဒီလို ပြောလိုက်တော့ ဆရာမက စာအုပ်ယူသွားတာပေါ့။ ကိုယ့်စကားနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့လည်း လိုက်တောင်းရအခက် ဘယ်လိုဥာဏ်ကူရမလဲ စဉ်းစားပြီး ဆရာမကို ထပ်ပြောလိုက်တာပေါ့။ ဆရာမ ဖတ်ပြီးရင် ပြန်ပေးပါ။ သမီး ငှားလာတာဆိုတော့ ပြန်အပ်ရမှာလို့ ပြောလိုက်တော့ အတန်းလွှတ်ရင် လာယူလို့ ပြောလိုက်မှ ဟင်းခနဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ အဲဒီထဲက စာပေ၀ါသနာပါလာခဲ့တာပေါ့။
Posted by manawphyulay at 1:31 AM No comments:
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေး
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်ယှဉ်ပြီး ခေတ်မီတိုးတက်နေတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးခေတ်ကြီးလို့ တဖြည်းဖြည်းပြောလို့ရလာတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်သော ခေတ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မျက်စိရှေ့မှာ စူပါမားကတ်ကြီးတွေ၊ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ ရှောပင်းမောတွေစတဲ့ တိုက်တာ အဆောက်အအုံကြီးတွေလည်း တိုးတက်များပြားလာနေသည် မဟုတ်ပါလား။ ဟော နောက်တစ်ချက်က မြို့ထဲ တိုက်ဟောင်းတွေဖြို၊ တိုက်သစ်တွေဆောက် ကြိုတင်လေလံဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချ၊ စီးပွားရေးသမားတွေက နေရာကောင်းကောင်း သူ့ထက်ငါ အလုအယက်ဝယ်ယူ၊ ဆိုင်ခန်းတွေဆောက်နဲ့ နေရာတိုင်းမှာလည်း အရောင်းစင်တာကြီးတွေ ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဒါတွေပဲလားဆိုတော့ ဆက်ကြည့်ပါဦး။ ရပ်ကွက်တွေမှာဆိုရင်လည်း လူနေတိုက်ခန်းမြေညီထပ်တွေ၊ အိမ်ရှေ့အဖီတွေဆိုရင်လည်း စတိုးဆိုင်တွေကနေပြီး အနည်းဆုံး စုံစီနဖာဆိုင် ကလေးတွေ အဆုံး အစီအရီရောင်းနေကြတာလည်း မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ နောက်ပလက်ဖောင်းတွေ လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေမှာလည်း ဈေးဆိုင်၊ ပန်းခြံကားဂိတ်တွေမှာလည်း ဈေးဆိုင်တွေနဲ့ပြည့်လို့။ ဒါကြောင့်ပြောတာ
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဆိုတာ စီးပွားရေးခေတ်လို့၊ ဒါပေမယ့် တချို့ကျတော့ နည်းပညာခေတ်လို့ ပြောနေကြပြန်ရော။
လမ်းလျှောက်ရင်တောင် မျက်စိမှိတ် မလျှောက်မိစေနဲ့ တစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိလို့ မျက်စိဖွင့်ကြည့်ရင်တောင် အဲဒါဈေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖြစ်နေပါရောလား။
ဒါတောင် လမ်းဘေးရောင်းတာနော် တိုက်မိလို့ပြန်ပြီး ကောက်ပေးတာတောင် ဈေးသည်က ရှစ်ခေါက်ချိုးရုပ်နဲ့ ထသတ်မလားမှတ်ရ။ အင်း ဒါတောင် ခေါင်းရွက်နဲ့ လည်ပင်းဆွဲပြီး တိုက်ကြိုတိုက်ကြား၊ မီးရထား၊ သင်္ဘောပေါ်တွေမှာပါ ဈေးသည်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ပေါများနေသလဲဆိုတာ ပြေးမကြည့်နဲ့တွေးကြည့်တာနဲ့တင် သိနိုင်တယ်။
Posted by manawphyulay at 12:18 AM No comments:
အကျင့်စာရိတ္တက စကားလုံးများထက် တာသွားလှပေသည်။ အပွေးမြင် အပင်သိဆိုသလို သင့်ဘ၀ အခြေ အနေကို ကြည့်ကာ သင်မည်သူဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခု စတင်တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကို ဦးစွာ အာရုံစူးစိုက်ရပါမယ်။ အကျင့်စာရိတ္တဆိုသည်မှာ ကျွန်မတို့ အမှန်တကယ် ပြုမူလုပ်ဆောင်နေသော အရာများကို ဆိုလိုပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏ အကျင့်စာရိတ္တကို သိနိုင်မည်။ ကျွန်မတို့ လူဘ၀ဖြစ်တည်လာမည့် နေရာ၊ မိဘ၊ ကလေးဘ၀ စသည်တို့ကို မရွေးချယ်နိုင်ပါ။ ယင်းအပြင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ထူးချွန်မှုနှင့် ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးတို့ကို မရွေးချယ်နိုင်ပါ။ သို့သော် ကျွန်မတို့ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကိုမူ ရွေးချယ်မှု ပြုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းများက တာရှည်ခံတဲ့ အောင်မြင်မှုများကို ပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်အကျင့်စရိုက်များက သင့်ဘ၀ကို တည့်မတ်ပေးနိုင်သလို ဖြိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ အနှေးနှင့် အမြန်ဆိုသလို သင့်အကျင့်စာရိတ္တများ ဗူးပေါ်သကဲ့သို့ ပေါ်လာပြီး သင် စိုက်သည့်အတိုင်း ရိတ်ရမှာပါ။ တကယ့်အခက်အခဲ အကြပ်အတည်း ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာခဲ့ချိန်မှာ သင့်အကျင့်စာရိတ္တအမှန်က သင့်ကို တည့်မတ်သော ဘ၀လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ချင်း ဖြတ်သန်းကျော်လွှားသွားခွင့်ကို ပေးပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ပြုပြင်သင့်သည်များကို ပြုပြင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ကျရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် မည်ကဲ့သို့ ပြုကျင့်ရမည်နည်း။ အချက် သုံးချက်ပဲ အရင်ရှာဖွေပါ။
Posted by manawphyulay at 12:12 AM No comments:
We are happy to facilitate and organize necessary services for you, your family and friends to experience our Myanmar traditional culture, arts, crafts and the true nature of our Myanmar people and society especially in Upper Myanmar, Mandalay asacentral part of Myanmar.
Myanmar, known as Suvanna Bhumi (the Golden Earth) in the olden days for its fertile land and rich natural resources, is the largest country in the South-east Asia Peninsula sharing borders area of 676,577sq.km, and hasacoastline measuring 1,275 miles (2051km). The country stretches over 2090 km from north to south and over 925 km east to west. Over 50 percent of the total land area is covered with forests. The terrain ranges from arid plains to cool, sprawling hills, ice-capped mountains, white-sand beaches, lush farmland and hidden valleys.
Posted by manawphyulay at 11:31 PM No comments:
ဘလောဂ့်အမည်ကို ရွှေမြန်မာလို့ ပေးရခြင်းအကြောင်း
ယဉ်ကျေးမှုအစစ်အမှန်ဟာ လူ့အနှစ် အမြုတေရတနာဖြစ်ပါတယ်။ ပထ၀ီအနေအထား၊ လူနေမှု စနစ်၊ ဓလေ့ထုံးစံ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ဘာသာအယူဝါဒ၊ အဆိုအတီးအက၊ စာအရေးအသား၊ အတွေး အခေါ် စသည့်တို့ကိုမှီ၍ ယဉ်ကျေးမှု သဘောတရားများ ဖြစ်ပေါ်လာ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ပေါ့လေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ထည်ထည်ဝါ၀ါ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ် ပါတယ်။ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သာသနာ စည်ပင် ပြန့်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စင်စစ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ အမျိုးသားစိတ်၊ အမျိုးသား သဘောတရား ကိန်းဝပ်နေသော ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာ နိုင်ငံခြား ယဉ်ကျေးမှုများ ပျံ့နှံ့လာမှုကြောင့် မြန်မာအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအတွက် အန္တရာယ်ရှိလာတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်မ​ စဉ်းစားမိတာပေါ့လေ။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုသာ တကယ်လို့ နိမ့်ကျသွားခဲ့ရင် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးလည်း နိမ့်ကျသွားတော့မှာပဲပေါ့။ ဒီလိုတော့ မဖြစ်သင့်တာအမှန်ပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ တာဝန်ဆိုတဲ့နေရာ မှာလည်း ပြောမှသိမှာထက် ကိုယ့်ရဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ် သိဖို့ အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်း လူတိုင်း ကျွန်မနဲ့အတူ ယဉ်ကျေးမှုကြီးကို ထိန်းသိမ်းကြပါစို့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုကြီးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကြီး သုံးခုရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘာတွေလဲ။ ကြည့်ကြရအောင်နော်။ လိုနေရင်လည်း အမြင်ကို ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မ သိသလောက် ကို ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရှိပြီးသား အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရေး။
(၂) မတွေ့ရှိသေးသော ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေး။
(၃) အသစ်အသစ်သော အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုများကို တီထွင်ရေးတဲ့။
အဲဒီမှာ ပြောစရာရှိတာက ယဉ်ကျေးမှုကို တီထွင်တဲ့နေရာမှာ အနောက်ယဉ်ကျေးမှုကို တီထွင်တာကို မဆိုလိုဘူးနော်။ ဒါဟာ တီထွင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သရုပ်ပျက်ဝါဒကို ကျင့်သုံးနေကြတာလို့ ကျွန်မတော့ မြင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး ခေတ်ကာလအလျောက် အသစ်တီထွင်ဖန်တီးလာတဲ့ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဖန်တီးဆန်းသစ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ။ တောင်ရှည်ပုဆိုးဝတ်ပြီး ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်ကို တွဲဖက်ဝတ်တာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မက ကိုယ့်နိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားသားများ သဘောကျသလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မြတ်နိုးမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာမှု မြန်မာဟန်ကို မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းထားချင်တာ ကျွန်မရဲ့ရင်ထဲက ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘလောဂ့်အမည်ကိုလည်း ရွှေမြန်မာလို့ အမည်ပေးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
Posted by manawphyulay at 11:08 PM No comments:
ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာအချက်တွေ လိုအပ်သလဲ
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည်။
ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အနိမ့်ဆုံး၊ အကြမ်းဖျဉ်း လိုအပ်ချက်များပင် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ကိုယ့်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရမည်။
၂။ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ရမည်။
၃။ နိုးကြား တက်ကြွရမည်။
၄။ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရမည်။
၅။ စိတ်စေတနာကောင်း ထားရှိရမည်။
၁၃။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ရမည်။
၁၄။ အများ၏ ချစ်ခင်လေးစားမှုကို ခံယူရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၆။ တီထွင်ကြံဆ လုပ်ဆောင်တတ်ရမည်။
၁၇။ မိမိကိုယ်ကို အမြဲတိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေရမည်။
၁၉။ တာဝန်ယူရဲသူ၊ တာဝန်ခံရဲသူ ဖြစ်ရမည်။
၂၀။ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း ရှိရမည်။
၂၁။ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ရမည်။
၂၂။ တာဝန်ကို ရိုသေ၍ အသိနှင့်ယှဉ်ပြီး ဆောင်ရွက်တတ်ရမည်။
၂၃။ လုပ်ငန်းနှင့် အချိန်တိကျပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Posted by manawphyulay at 10:49 PM No comments:
သင်ရဲ့ ငွေကြေးများကို မြဲမြဲမြံမြံ ဆုပ်ကိုင်ထားနို...
ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာအချက်တွေ လိုအ...
Vacancy Announcement (2)
Website Index (3)